Sierra Foothills: Làlan-divay any California
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sierra Foothills: Làlan-divay any California
California dia manana faritra divay betsaka, ao anatin'izany ny toerana sasany malaza indrindra eto an-tany. Saingy miafina na eo amin'ireo antsoantso ambony aza dia ny làlan-divay tsy dia mandeha intsony izay ahitana ny toerana ambanivohitra mahavariana, divay matsiro ary, matetika, vitsy ny mpitsidika. Mba hanampiana ny mpanjifa hahita divay sy divay vaovao amin'ity fahavaratra ity, dia manasongadina ireo làlan-divay sy faritra voatondron-doha tsy misy tohina ny andian-divay any California Country Country Country Road.
Ny orinasa Sierra Foothills dia manana orinasa famokarana divay mihoatra ny 200 izay ahitan'ny mpitsidika tanimboaloboky ny tendrombohitra sy karazan-divay isan-karazany maniry eo akaikin'ny tanàna Gold Rush manan-tantara sy ireo valan-javaboary mahatalanjona sy faritra ala. Sary nahazoan'i Lava Cap Vineyard.
Faritra divay any Sierra Foothills
Ny California Gold Rush tamin'ny 1848-1855 dia niseho teo afovoan'ny faritra divay Sierra Foothills izay rakotra havoana mitete 2.6 tapitrisa hektara, tanàna fitrandrahana taloha ary maro amin'ireo tanimboaloboka avo indrindra sy avo indrindra amin'ny fanjakana. Ny faritra dia fialofana ho an'ny orinasa mpamokatra divay kely tantanan'ny fianakaviana fantatra amin'ny tantarany manankarena, voaloboka 100 taona sy divay mena feno vatana, manerana ny faritra valo — Amador, Calaveras, El Dorado, Mariposa, Nevada, Placer, Tuolumne sy Yuba. Eto dia afaka mankafy ny mpitsidika ny fampiroboroboana ny vintages farany misy ny toerana mahatalanjona ao California, satria ity faritra divay ity dia manana zaridainam-pirenena telo sy faritra 20 any an'efitra izay ahitana ny Valan-javaboary Yosemite sy ny Farihin'i Tahoe.
TASTE: Ny faritra Sierra Foothills dia trano fonenan-divay mihoatra ny 200 sy karazana voaloboka maro karazana. Amador County, tafiditra ao amin'ny lemaka andrefan'ny tandavan-tendrombohitra Sierra Nevada, dia ahitana famokarana divay mihoatra ny 40 - maro ireo manampahaizana manokana amin'ny divay mihira Zinfandel, Barbera ary Rhône. Ao amin'ny faritanin'i Calaveras, toerana nanoloran'i Mark Twain ny lazan'ny tantarany tamin'ny alàlan'ny tantaram-pivarotany "The Jumping Frog of Calaveras County," dia mihoatra ny 25 ireo efitrano manandrana eo amin'ny Main Street of Murphys mahafinaritra. El Dorado County, miaraka amin'ireo tanimboalobony eny an-tampon'ilay lohasaha, ahitana famokarana divay miisa 70 mamokatra ny zava-drehetra manomboka amin'ny varietaly miorina amin'ny Cabernet ka hatramin'ny divay vita amin'ny karazana voaloboka Rhône, Alemanina, Italiana ary Espaniola. Ny vatosoa any an-dàlana dia azo jerena ihany koa ao amin'ny County County, Placer County ary Yuba County. Raha te hanandrana faritra kely maromaro ianao, dia mizora mitsangantsangana any amin'ny làlambe manan-tantara 49. Manomboka any Oakhurst ny làlana, avy eo mamakivaky ny faritra avaratra mamaky faritany marobe, toy ny Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada ary maro hafa.
TOUR: Mankalazà divay, sakafo ary fambolena any an-toerana mandritra ny 20-21 Jona mandritra ny Andro voaloboka ao Placer Wine Trail, fitsidihana mitarika irery izay ahitana sakafo, mozika ary traikefa amin'ny fanabeazana isaky ny fijanonana ao amin'ny County Placer. Amador County's Festival Barbera fanao isan-taona amin'ny volana septambra mandritra ny California Wine Month dia manome tsiro avy amin'ny famokarana divay mihoatra ny 50 ao an-toerana, miampy sakafo mahafinaritra, mpivarotra mozika ary mpivarotra mpanakanto. Tamin'ny volana septambra ihany koa dia ny WineDerLust Renegade divay divay ao Placerville, bazaar divay sy kaonseritra mampiseho ny divay tsara indrindra an'ny El Dorado.